Archive de l'auteur | NewsMada | Page 826
Tsiahy Andrianina : hitondra an-tsehatra ny « An’iza ny foko ? »
Par Taratra sur 12/10/2016 NS Malagasy, NS-Culture
« Emboka fitia », boky nosoratan’i Tsiahy Andrianina. « Fo mifampitantanta », boky nosoratan’ity mpanoratra ity sy Riva. Ho famoahana ireo boky roa ireo, hisy ny tsangan-tononkalo nampitondraina ny lohateeny « « An’iza ny foko ? », hotanterahina etsy amin’ny Cemdlac Analakely ny 29 oktobra izao manomboka amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro. « Boky telo no natambatra holalaovina an-tsehatra. Narindra ho tantara iray […]
Toamasina : toeram-pivarotana voatafika, olona iray voatifitra
Par Taratra sur 12/10/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nirefondrefotra indray ny basy tany Toamasina, teo anoloan’ny lapan’ny Tanànan’ i Toamasina sy toby fivarotan-tsolika iray teo amin’ny “boulevard de l’UA” mihazo ny Hopitalikely sy Omsi, ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 4 ora sy 45 minitra tolakandro. Ivontoeran’ny tambanjotram-pifandraisana iray ity nidiran-jiolahy miisa dimy nirongo basy ary mandeha amina moto Jog 50 roa ity, […]
Par Taratra sur 12/10/2016 Divers, NS Malagasy
Hotely iray notafihin’ny jolahy miisa telo nitondra Kalacknikov tany Soamahamanina, ny alatsinainy teo tamin’ny 8 ora alina. Nanapoaka basy avy hatrany ireto jiolahy ireto vao niditra ny trano ka niantefa teny amin’ny rindrina ny bala. Nitaky ny vola izy ireo ka nitsoaka raha vantany vao nahazo izany. Nanaraka ny arabe RN1 izy ireo, raha vao […]
Ilafy : taolam-paty telo gony hitan’ny mpifankatia nampiaraka
Tsy nanampo! Nahita zavatra nifonofono tao anaty gony ireto mpifankatia nampiaraka teny Andohalo Ilafy, ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany tolakandro. Taolam-paty telo gony ny hitan’ireto mpifankatia tamin’izany, ka nampandrenesina ny sefom-pokontany. Nampandre ny zandary avy ao Ankadikely ity farany. Tonga teny an-toerana ny zandary nizaha ity tranga ity, ka […]
Bemahatazana : maty ireo olona 3 nataon’ny dahalo takalon’aina
Tsy mitsitsy ireo dahalo. Olona telo nataon’ireo takalon’aina maty novonoiny tamin’ny fomba feno habibiana. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana ny olona telo nalain’ny dahalo nataony takalon’aina tany Bemahatazana, faritra Bongolova ny faran’ny herinandro teo. Ny sasany nodorana ny lohany, ny hafa notifirina avy hatrany, ary narian’ireo dahalo teny an-dalana ny razana. Nambaran’ny mponina fa novonoina […]
Miaro ny olona sy ny fananany hoe ?
Par Taratra sur 12/10/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
«Miaro ny ain’ny olona sy ny fananany, na an-tsaha na an-tanàna». Izay no re ombieny ombieny fa hoe asa sy andraikitry ny mpitandro filaminana. Marina izany, saingy amin’ny ampahany ihany. Indraindray aza, azo lazaina ho tsy mitombina mihitsy, raha ny zava-misy hita sy re eo anivon’ny fiarahamonina. Toa mifanohitra amin’izany ny zava-mitranga ka mampametra-panontaniana ny […]
“Kidnapping Karana” : mifampiampanga ny polisy sy zandary
Tsy mbola votsotra any am-pelatanan’ny jiolahy ilay Karana nisy naka an-keriny ny asabotsy teo, teny Ambohimanambola. Efa hita teny Sabotsy Namehana, omaly, kosa anefa ilay fiara Toyota 4×4 V8, izay tsy nahitana olona na iray aza tao anatiny. Voalaza, araka ny loharanom-baovao azo antoka fa nahitana basina mpitandro filaminana tavela tao anaty fiara. Araka ny […]
Ekar sy ny FJKM Soamahamanina : « Atsaharo ny fampihorohoroana, avoahy ireo nogadraina… »
Par Taratra sur 12/10/2016 La Une, NS Malagasy, NS-Politique
Nivoaka amin’ny fanginany, omaly, ny eo anivon’ny fiangonana any amin’ny faritr’i Soamahamanina ka nanao fanambarana. Nahazo ny anjarany ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana. Teo koa ny antso avo ho an’ny vahoaka sy ny mpanao gazety. « Tsy tokony ho herim-panomeratana ny mpitandro filaminana fa ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany… Atsaharo ny fampihorohoroana […]
Kitra – Fifanintsanana «Mondial 2018» : voaroaka ny mpanazatran’i Lybie fa resin’i Kongo
Par Taratra sur 11/10/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Notontosaina, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana, amin’ny “Mondial 2018”, taranja baolina kitra. Betsaka ireo firenen-dehibe sahirana. Vokatr’izay, nisy ireo nanala ny mpanazatrany. Betsaka ireo ekipa heverina fa manana ny toerany sy goavana eto Afrika no sahirana teo amin’ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana, ho an’ny “Mondial 2018”, tanterahina any […]
Handball : tompondaka ny St Michel sy THBC
Par Taratra sur 11/10/2016 Divers, NS Malagasy
Tontosa, tany Toamasina, ny asabotsy lasa teo ny fifanintsanana ho an’ny faritra afovoany hiadian-toerana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja handball, sokajy “senior” lahy sy vavy. Raha teo amin’ny vokatra, lasan’ny St Michel Analamanga ny teo amin’ny lehilahy. Resin’ny ekipan’Amparibe tamin’ny isa 36 noho 30 ny Hasin’i Toamasina. Hanampy ireto ekipa roa ireto amin’ny famaranana lehibe […]
Rugby Analamanga : lasan’ny FTM ny amboara
Norombahin’ny FTM Manjakaray (Dakar) ny amboaran’ny ligin’Analamanga, taranja rugby. Resin’izy ireo, tamin’ny isa tery, 17 noho 16, ny ekipan’ny Savony, nandritra ny lalao famaranana, notanterahina teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny alahady lasa teo. Niady ny fihaonan’ny roa tonta ary tena nampitsanga-mitoetra ireo mpijery tonga maro, nandritra ny 80 mn nilalaovana. Na izany aza, ry […]
Analamanga : tohanan’ny faritra ireo atleta
Mahazo vahana manerana ny fokontany eto an-dRenivohitra, ankehitriny, ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Anisan’ny taranja be mpanao amin’izany ny basikety sy ny baolina kitra ary ny tsipy kanetibe. Ho fampiroboroboana ireo fihaonana rehetra hatao sy ho fampirisihana ireo tanora mpifaninana, isaky ny fokontany amin’izany hetsika izany, tsy maintsy ampiana sy tohanana izy ireo, araka ny nambaran-dRakotonanahary Ndranto, […]
Zandarimaria : fampahalalana mikasika ny banky
Par Taratra sur 11/10/2016 Economie, NS Malagasy
Nanome fiofanana zandary miisa 23 ny banky BFV-SG, nanomboka omaly sy anio. Avy any amin’ny toby samihafa eto Madagasikara izy ireo, miofana mikasika ny fahalalana ankapobeny momba ny banky, ny ady atao amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola ny fampihorohoana. Eo koa ny lafiny lalàna sy fitsarana ny tontolon’ny banky, ny andinin-dalàna sy fepetra tokony harahina […]
Fitaterana an-dranomasina : hiatrika ny fifaninanana ny seranan-tsambon’i Toliara
Antitra loatra ny seranan-tsambon’i Toliara, izay efa naorina tany amin’ny 80 taona lasa. Manoloana izany, mandeha ny asa fanitarana azy ankehitriny, iarahan’ny minisiteran’ny Fitaterana, APMF sy mpiara-miombon’antoka. Mijery ny asa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toliara ny minisitry ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro, Ramanantsoa Ramarcel, miaraka amin’ny tale jeneralin’ny APMF, kolonely Zipa Jean Hubert. […]
Fanadihadiana nataon’ny FTHM : tsara toerana hatrany ny Star eo amin’ny indostria
Ny taona 2014, laharana faha-6 ny Star amina sehatra rehetra fa voalohany kosa eo amin’ny indostria misy azy. Amin’izao 2016 izao, tsara toerana hatrany ny Star, mbola laharana voalohany eo amin’ny indostria ary niakatra fahatelo amin’ny sehatra rehetra. Fanadihadiana niainga nataon’ny cabinet FTHM (Finances, Technologies, Human Ressources, Management) nanomboka ny taona 2014 ny nahitana izany. […]
Fifaninanana « Selfie » : hasongadina Iarivo
Par Taratra sur 11/10/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Na efa tapitra aza ny fotoam-pialan-tsasatra, fotoana mahabetsaka ny mpizahatany tonga eto amintsika, tsy mitsahatra mitrandraka toerana kanto sy mahaliana eto Antananarivo ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana). Ho hita taratra izany ao anatin’ny hetsika « J’aime Tana et je le partage », izay midika koa hoe « Tiako Antananarivo ary zaraiko ». Fifaninanana maka sary ny tena […]
Be loatra : ahena ny vola ho an’ny mpiasam-panjakana
Takin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, toy ny Tahirimbola iraisam- pirenena (FMI), ny fitantanana mazava ny volam-panjakana. Raha ny fenitra iraisam-pirenena, tokony tsy hihoatra ny 4,7% miohatra amin’ny Vokatra anatiny ankapobeny (PIB) ao amin’ny firenena iray ny vola atokana ho an’ny mpiasam- panjakana. Tsy manaraka izany ny eto Madagasikara, fa mahatratra 5,9% miohatra amin’ny PIB. Ezaka ataon’ny […]
Tetibola 2016 : nahena ny fitomboana ara-toekarena
Tsy araka ny tombantombana ny fitomboana ara-toekarena amin’ity taona 2016 ity. Amin’ny ankapobeny, vinavinain’ny fanjakana ho 4,1% ny fitomboan’ny harinkarena faobe noraiketina ao anatin’ny tetibola nahitsy 2016 (LFR) raha noheverina ho 4,5% tany am-boalohany (LFI). Eo amin’ny sokajim-pamokarana samihafa, tsy voafaritra tsara ny famatsiam-bola avy any ivelany, ho an’ny tetikasa momba ny fambolena, ka nahena […]
Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany : mitombo ny olona tsy ampy sakafo
Vokatry ny haintany, tsy ampy ny vokatra sy ny sakafo any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Mitombo ny mponina sahirana sady marefo, ary ahina hihamafy izany amin’ny volana novambra, fotoana tena hanombohan’ny maitsoahitra. Mihasarotra ny zava-misy any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany tato anatin’ny roa volana farany, aogositra sy septambra teo. […]
Pr James Robinson : « Ilaina ny antoko politika matanjaka… »
Par Taratra sur 11/10/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Hizara traikefa. Nitondra ny fahaiza-manaony amin’ny eo anivon’ny antoko Tim ilay manampahaizana, ny Pr James Robinson, nohafaran’ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Notsindriny manokana ny momba ny antoko politika. « Tsy misy toekarena mandeha eo amin’ny firenena raha tsy matanjaka ny politika. Noho izany, mila antoko politika matanjaka ny fampandrosoana. Tsy hipetraka ny filaminana politika sy […]
An-kitsim-po : « Permis de construire » mandany fotoana
Anarivony maro, raha ny filazan’ny kaominina, ny fanaovan-trano eto an-dRenivohitra, tsy misy fahazoan-dalana (permis de construire). Misy ny manangana avy hatrany tsotra izao, araka izay saim-pantany ; fa ao koa ny tsy mangataka izany any amin’ny kaominina fa “mifanaraka” amin’izay tompon’andraikitra any ambadibadika any. Ireo mangataka izany fahazoan-dalana izany indray anefa, sahirana, lany fotoana amam-bolana […]
Rakotoniaina Pety… : “Ho hery mpanatanteraka ny dinika ny vahoaka”
“Ho anay manokana, roa ihany ny hery mpanatanteraka. Na misy fanjakana mipetraka eo, mahatsapa ny ilàna ny dinika dia tonga izy. Efa fantatray izany izao ny valin-teny fa tsy tonga izy. Ny dikan’izany, tsy maintsy herim-bahoaka no hanatanterahana azy. Koa izay izao ny fandehany, satria tsy maintsy atao io.” Io ny nambaran’ny eo anivon’ny Malagasy […]
Noho ny Comesa… : hampiato ny fitokonany ny mpirakidraharaha
« Mety hanosoram-potaka anay hoe misy ambadika politika ny hetsika ataonay amin’izao fivorian’ny Comesa izao ka hampiato ny fitokonana mandritra ny fotoana tsy voafetra aloha izahay », hoy ny filohan’ny sendikàn’ny mpirakidraharaha, Randriambololona Haja, omaly tetsy Anosy. Nohamafisiny fa hanaporofoana ny tsy fisian’izany ambaran’ny sasany fa ambadika politika izany sy ny filazana fa hanakorontanana ny Comesa ny […]
Nodimandry i Bera, mpitsoka saxophone
Anisan’ireo mpiangaly zavamaneno tsofina i Bera. Nisongadina teo amin’ny filalaovana jazz izy, ka ny saxophone, trompette ary ny fluelhorn no tena nolalaoviny. Anisan’ireo mpitendry zavamaneno niara-niasa tamina mpanakanto maro, ary tao anatina tarika mpampandihy ihany koa izy. Miraradraraka ny fanehoana fiaraha-miory sy fankaherezana ao anatin’ny tambajotra “Facebook”, noho ny fahalasanan’ity andrarezina ity. Maro tahaka izany […]
Fakafaka : fa angaha tsy maintsy hitovy io e!
Mahavariana fa ireo heverina ho manampahaizana manaka-danitra indray no mamalan-kira. Tafahoatra loatra, angamba, ny fanjanahantsaina mahazo ny Malagasy ka tia manao fampitahana amin-dry zareo vahiny. Fahazarana tsy azo ampiharina manoloana ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao. Hoy ilay manampahaizana iray izay : « amin’ny teny malagasy, inona ny dikan’ny « esprit »» ? Fa angaha tsy maintsy hisy dika amin’ny […]
« Précédent 1 … 824 825 826 827 828 … 1 067 Suivant »